मधु मेरै प्रेमीका हुन – महानायक हमाल-Nagarikaawaj.com
मधु मेरै प्रेमीका हुन – महानायक हमाल
राजेश हमाल नेपालका एक नम्वरका अभिनेता हुनुहुन्छ । उहाको जन्म १९६४ जुन ९ तारिखमा पाल्पा जिल्लाको तानसेनमा भएको हो । महानायक हमालले आफ्नो विद्यालय स्तरिय शिक्षा मास्कोटवाट र उच्च शिक्षा (एम ए ईङ्लीस) भारतको पन्जाव विश्वविद्यालयवाट पुरा गर्नुभएको हो । नेपालमा कक्षा ८ सम्म सेन्ट जोभीयर अध्यन गर्नुभएको थियो भने सर्वप्रथम १९८५ भारतको फेसननेट म्यागजिनमा र १९८६ मा नेपालको काठमाण्डौमा ¥यापरमा हिडेर ग्ल्यामरमा पाईला चाल्नुभएको थियो । १ सय ७० भन्दा वढि नेपाली चलचित्र र एक पाकीस्तानि चलचित्र अभिनय गर्नुभएका हमालसँग रगंपत्रकार रामजी ज्ञवालीले आजको रगंवार्तामा उहाँको व्यक्तीगत वुझाई खोतल्ने प्रयास गरेका छन् ।
असल व्यक्ती वन्न हुनपर्ने ३ कुरा ?
– मेरो विचारमा कुनै व्यक्ती असल हुनका लागी ईमान्दार हुन जरुरी छ, आफुप्रति र अरुप्रति । आफ्नो जुन कार्य क्षेत्र हो त्यसप्रति लगनशिलता हुन जरुरी छ । आफुले जे काम गरेपनि जे पेशा अपनायपनि मानविय पक्षलाई विर्सन हुदैन र यसलाई कसरी सार्थक र सक्षम वनाउने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ ।
काममा प्रभाव पार्ने तिन कुरा ?
– कसैले पनि उक्त काम प्रति आफ्नो मन मस्तिष्ष्क दिएर गरेको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । कस्तो किसीमले गरिरहेको छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरा हो । आधा मनले काम गर्ने, केही फाईदाका लागी र कुनै प्रलोभलमा परेर काम गर्छ भने असफल पनि हुन सक्छ । काम गर्ने व्यक्तीले पुर्ण ध्यान दिएर गर्नुभएको छ कि अर्ध ध्यान दिएर गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ ।
तपाईलाई गित संगित सुन्न र कितावहरु पढ्न कत्तिको मन पर्छ ?
– गितसंगित नसुन्ने र नरुचाउने त विरलै होलान मान्छेहरु । तर मलाइ यस्तै खालका गितहरु अत्तिनै मन पर्छ मन्ने त छैन । गितसंगित त मलाई पनि असाध्यै मन पर्छ । आधुनिकवाट लिएर पप, दोहोरी, लोक सवै किसीमका गितहरु रुचाउँछु । सवैले आफ्नो मुड अनुसार आकर्षीत गर्छ, मन पर्नेगर्छ ।
अहिलेसम्म धेरै ठाउँ घुम्नुभयो, नेपालको सवैभन्दा मन पर्ने ठाउँ ?
– हुनत सवैले त्यहीनै भनेका हुन्छन् । मलाई पनि पोखरानै रमाईलो लाग्छ । आफु वसेको ठाउँवाट नजिक भएकोले पनि हुन सक्छ । तर अझ पनि डाडाँकाडाँतिर घुम्न जान मन पर्छ । जस्तो पाँचथर पनि निकै रमाईलो लागेको थियो । यस्ता ठाउँमा घोम्नुको मज्जा वेग्लै हुन्छ ।
मान्छे किन रुन्छ होला ?
– मान्छे दुःखमा त रुन्छ तर सुःखमा पनि रुन्छ । सुःखका पनि आँसु हुन्छ । यद्यपी कसैलाई धेरै पिडा भयो भने त्यो स्वभाविक प्रक्रिया रहेछ । कहिलेकहिले पिडा र दुःख भएको वेला आसुँ आउदा त्यसलाई केही सहज पनि हुन सक्छ । त्यसले उक्त व्यक्तीलाई सन्तुलन पनि हुन सक्छ ।
यो जिवनमा के गरेर मन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
– मलाई लाग्छ जिवनमा आफुले गर्न चाहेको कुरा र गरेका कामहरु, ईक्षाहरु सफल होस, यादनीय होस । अन्त्यमा मृत्यु पनि सहज होस । जन्म र मृत्यु त एउटा सिक्काको दुई पाटो हो । मृत्यु अनिवार्य भएपनि मृत्यु सहज भयोकी भएन त्यसले पनि ठुलो भुमीका खेलेको हुन्छ । त्यसले गर्दापनि वाचुन्जेल कुनै काममा निकै मेहेनत तरिकाले काम गरौ भन्ने लाग्छ ।
यस क्षेत्रमा नलागेको भए अहिले कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला ?
– मैले सोच्न पनि सकेन, त्यतीवेला अरु कुनै क्षेत्रमा ध्यान गएन । तपाईलाई थाहानै छ, यो क्षेत्रमा २४ वर्षदेखी व्यस्त छु । निरन्तर यो क्षेत्रमा भएकाले अहिले र आगामी दिनमा पनि चलचित्र क्षेत्र भन्दा वाहीरका कुनै पनि क्षेत्र र पेशामा ध्याननै गएन र त्यतीवेला पनि केही सोच्दैसोचीन ।
कहिलेकाही यो क्षेत्रमा पछुतो मान्नुभएको छ ?
– हैन मान्छे जति ठुलो जागीर होस या जस्तो ठुलो उपलव्धी पाएपनि एकदिन न एकदिन केही कुरामा त पछुताएको हुन्छ । तर मलाई त्यस्तो पछुताएर यो क्षेत्र छाड्न वाध्य वनाउन त केही पनि कुराले सकेन । तर पनि कहिलेकाही धेरै कुराको टेन्सन हुदाँ सामान्य पछुताउनु कुरा स्वभाविक हो भन्छु म ।
के पाए र के गुमाए जस्तो लाग्छ ?
– सवै कुरा पाएको छु, गुमाउन त के गुमाएको छु भन्ने । यस्तो सम्झनामा आएन ।
युवावस्थामा प्रेम गर्नुभयोनाई ?
– हुन त अहिलेपनि म युवानै त छुनी, हाहाहा…….(लामो हासो) तर पनि कलेज लाईफमा पनि प्रेम भए अहिलेपनि प्रेमीका छिन् । प्रेम त थुप्रैसँग भयो ।
वजारमा तपाईकी प्रेमीका मधु जि तस्विर सार्वजनिक भएको छ तर तपाईले अहिलेसम्म हो भन्नुभएको छैननी
– हैन, हैन, वजारमा आएका मधु नामका तस्विर मेरै प्रेमीका हो । विवाह पनि चाडैनै हुन्छ । हो त कसरी भन्दै हिड्नेहो । एकैपटक विवाह भएपछि थाहा भैदिए राम्रो हुन्छ कि भनेर मात्रै ।
कस्ता युवतिले तपाईलाई आकर्षीत गर्छन ?
– युवतिहरुको वाहीरी रुपले त केही भुमीका खेल्छ होला तर त्यो भन्दा पनि धेरै भनेको उसको व्यक्तीत्व, आनीवानी र वोलाईले वढि आकर्षीत गर्छ ।
सहज जिवनका लागी आफ्नो प्रेमीका वा श्रीमतीको कत्तिको ठुलो महत्व राखेको हुन्छ होला ?
– एकदमै राम्रो पश्न गर्नुभयो, मलाई लाग्छ श्रीमती वा प्रेमीकाले गर्दा पनि आफुले गरेको काममा धेरै प्रभाव पार्छ । मेरै कुरा गर्छु कि मैले अहिले सम्म जति प्रेमीकालाइ मायाँ गरे वा प्रेमीकाहरु भए उनिहरुकै साथ र सहयोगले गर्दा म यो स्थानसम्म आउनका लागी केही सहज भएको हो जस्तो लाग्छ । मैले कुनै पनि प्रेमीकालाई नराम्रो किसीमले लिईन, सवैलाई राम्रै सोचे र उहाहरुले पनि राम्रै सोच्नुभयो ।
प्रेम र यसको महत्व जिवनमा कतिसम्म हुन्छ होला ?
– प्रेम असाध्यै जटिल विषयवस्तु पनि हो । किनकि यसमा आनन्द छ, दुःख छ र सुख पनि । यसले निकै खुसी दिन पनि सक्छ भने यसैबाट निकै निराश पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । यदि त्यो प्रेम सही व्यक्तीसँग र स्वच्छ छ भने त्यसले वेग्लै ऊर्जा दिन सक्छ जस्तो लाग्छ । र यसको महत्व त अयाध्यैनै हुन्छ किनकी प्रेमविना जीवन गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई । प्रेमीसँगको सम्बन्धविना कुनै पनि मान्छेको जिवनको यात्रा पार गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।